စိမ်း...: S or G
Posted by စိမ်း... 11.10.09
S for Sein ကိုရေးရမလား G for Green ကို ရေးရမလား ၂ ခါတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်ရို့... ဒါလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ကြပါ.... ဒါတောင် google ရှိနေလို့... အစကတည်းက E က သိပ်ကောင်းပါတယ်ဆိုနေမှ... :P
1. What is your name : Green
2. G as four Letter Word : Gage
3. boy's Name with G : George
4. girl's Name with G : Gaila
5. Occupation starts with G : Geographer
6. Flower starts with G: Gardenia (Ze Za War)
7. Something you'll wear starts with G: Gloves
8. Food starts with G : Gum
9. Something found in the bathroom starts with G : Gleem toothphaste
10. Country starts with G : Germany
11. Color starts with G: Gray
12. Exclamation starts withaG: Grrrrrr!!!!!! ( I use it when I writeasms to express my anger :P)
13. Movie title starts with G : Game of Seduction
14. Something you drink starts with G: Ginger Ale
15. A musical group starts with G : Green Day
16. An animal starts with G : Gorillas
17. A street name starts with G : Gay Lang in Singapore. he he :P
18. A type of car starts with G: Golf Car :P
19. The title ofasong starts with G : Greeen Light, Beyonce
20. A verb starts with G : Gain
သမီး အိပ်စာလုပ်တယ်နော်.... :P
kiki October 12, 2009 at 12:18 AM
ဂရင်း မမရေ .. ဂျာမဏီ သွား၊ ဂမ်းကလေးဝါး ပြီး၊ ဂရေး ရောင်ရှိတဲ့ဂေါ်ရီလာကြီးနဲ့ဂေါက်သွားရိုက် မလား ဟေ ...ဂလဗ်လေးစွတ်ဖို့ တော့ မမေ့နဲ့ ။ တော်ကြာနေ ဂရား ဂရား အော်ပြီးလိုက်ကိုက်နေမှဖြင့် ဂျင်ဂျာ လေး မသောက်လိုက်ရပဲ .. ဂေးလန်း ထိ လမ်းလျှောက်ပြန်နေရအုံးမယ် ..ဟိဟိ
တော်ဒယ် .. အိပ်စာ လုပ် လို့ဆုချမယ် ...ရော့ ဆင်ပူဒေါ် တထုတ် .. အတစ် စက်စက် ပူပူနွေးနွေးးးး ဟေးဟေးဟေး
ဝက်ဝံလေး October 12, 2009 at 3:08 AM
စောစော စီးစီး ပေါက်တတ်ကရတွေ လာပြောသွားတဲ့ မကိ ဘလော့ဂ်ဂါ ကောင်စီရုံးမှာ လက်မှတ်လာထိုးပါ ဒါဗြဲ
စိမ်းရေဖတ်သွားတယ်နော် သိလား ဟက် ခေါင်းကိုက်သွားတယ်ပေါ့ ဟုတ်ရား ကောင်းတယ် တိန် တိန် တိန် ဖွားကိ စတိုင်လ် ဟိဟိ
မယ်ကိုး October 12, 2009 at 4:09 AM
ညီမလေးလည်း ခေါင်းကိုက်သွားရှာပြီပေါ့ =)
မြစ်ကျိုးအင်း October 12, 2009 at 5:15 AM
သံလွင် HeRo October 12, 2009 at 7:32 AM
geylaung လုပ်ပါ။ ရင်တောင်တုန်သွားတာပဲ
maylay October 12, 2009 at 7:33 AM
စိမ်းရေ နာ့ကိုလည်း ခေါင်းကိုက်အောင် လုပ်ထားတယ်။ နာ ရေးရဦးမယ်။ ဝေါဟာရတွေလည်း နာ မှတ်သွားတယ်နော့
မချစ်ရ October 12, 2009 at 10:52 AM
ဦးနှောက်စား Tag နဲ့အလုပ်ရှုပ်သွားကြတယ်
ကိုလူထွေး October 12, 2009 at 1:36 PM
Google ကနေ Green ကိုရှာပြီး လိုက်လာတယ်...
သူ့ကိုယ်သူများ သမီးတဲ့...းD
Angel Shaper October 12, 2009 at 4:10 PM
အမရာ October 14, 2009 at 7:43 AM
Anonymous October 15, 2009 at 4:10 AM
Green အကြောင်းလေးတွေ လာဖတ်သွားပါတယ်
သားကြီး October 18, 2009 at 11:12 AM
Anonymous October 20, 2009 at 4:19 AM
မှားနေတယ် အက်စ် ဖြစ်ရမှာ ပြန်ရေး..ဒါပဲ